Burmese - MyamarEuropean Translation Agency
ဥရောပ ဘာသာပြန် အေဂျင်စီ
ဆောက်လုပ်ဆဲစာမကျြနှာ | ENGLISH
ကျွန်ုပ်တို့အား အီးမေးလ်ပေးပို့ရုံမျှဖြင့် အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသဖြင့် ပေးပို့ထားသည့်စာတိုင်းကို ဖြေဆိုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက အွန်လိုင်းရှိ ဆက်သွယ်ရန် ပုံစံ ကို အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ လင့်ခ်ပေါ်တွင် ကလစ်လုပ်လိုက်ရုံသာ ဖြစ်ပါသည်။ :
ပုံသေ စျေးနှုန်း ကို စုံစမ်းမည
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်ခကို မည်သို့ပေးချေရမည်နည်း။ အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ အွန်လိုင်း ငွေပေးချေရန်အတွက် မိတ်ဆွေ၏ အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့် (၂၄/၇ ပေးချေနိုင်ပါသည်) ပေးချေနိုင်ပါသည်။ e-VAT သို့မဟုတ် (ကုမ္ပဏီ ဖောက်သည်များအတွက်) အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတိုက်မှပေးပို့သည့် ငွေတောင်းပြေစာအတွက် ဘဏ်မှငွေလွှဲခြင်းဖြင့်လည်း (ငွေတောင်းပြေစာ ထုတ်ပေးသည့်ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်း ပေးချေရပါမည်) ပေးချေနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမဟုတ်သည့် ဖောက်သည်များသည် ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးလျှင်ပြီးချင်း ငွေပေးချေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးချေပြီးကြောင်း စာရွက်ကို စကန်ဖတ်ထားသည့်ပုံစံကို ပေးပို့ခြင်းကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
အရေးပေါ်လိုအပ်သည့် အလုပ်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ +48 609 999 999
၂၄ နာရီ ပတ်လုံး ဘာသာပြန်အလုပ်မျိုးစုံကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။ ဘာသာပြန်ခြင်းအလုပ်တွင် အချိန်သည် ငွေဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။.
24/7 SERVICE ကို Express
Abkhaz, Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Assamese, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Burmese, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Chechen, Croatian, Czech, Danish, Dari, Burmese, Estonian, Faroese, Fijian, Filipino, Burmese, French, Georgian, German
Greek, Gujarati, Hausa, Hebrew, Hindi, Burmese, Icelandic, Burmese, Italian, Japanese, Kashmiri, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Lao, Latin, Burmese, Burmese, Luxembourgish, Macedonian, Malay, MALTESE, Marathi, Moldovan, Mongolian, Montenegrin, Nepali, Norwegian,
Ossetian, Oromo, Pashto, Persian, Polish, Burmese, Punjabi, Burmese, Russian, Serbian, Sinhala, Burmese, Slovene, Somali, Spanish, Suahili, Swedish, Tagalog, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Yiddish, Zulu
Daily Express Service 24/7 click ဒီမှာ.
GDPR မှတ်ချက်! ကျနော်တို့ CV ကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအီလက်ထရောနစ်စလှေတျတျောတှငျပါရှိသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို process ပါဘူး။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာများအားလုံးသည် e-mail ကိုဖျက်လိုက်ပါနေကြသည်။ ကျနော်တို့မဆိုလမ်းထဲမှာကသူတို့ကို share ကြပါဘူး။ သင်တစ်ဦးဘာသာပြန်ဆိုသူသို့မဟုတ်စကားပြန်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, PROZ.com မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ
(+48) 609 999 999 (သာအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်)
ဌာနချုပ်: European Translation Agency - Proximuss, Tamka 40 Street , 00-355 Warsaw, Poland, Tax Identification Number: PL738-179-24-08 (check official EU tax status here), tel: +48 609 999 999 (infoline 24h)